Ilkaha caddeeya Alaab-qeybiyeyaasha iyo Wershadlayda. | Shiinaha Ilkaha caddeeya soosaarayaasha siyaada ah
midkoodna majiro peroxide hp ama cp gel ilkaha qalabka cadeeya sirinjiyada
Moodelkani waa xirmo ilkaha aqoon u leh oo caddeeya qalabka saloon ama rugta caafimaadka ilkaha, waxaannu leenahay hp, cp ama peroxide midna oo aad adigu doorato, waxaan taageernaa adeegga astaanta oem, waxaan raadineynaa qaybiyayaal, haddii aad xiiseyneyso, fadlan u soo dir baaritaanka annaga, waxaan uga jawaabi doonnaa asap
xirmo tayo sare leh oo jumlo ah oo caddeeya qalinka
Qalabkan ilkaha lagu caddeeyo ayaa ah kan ugu iibinta badan ee ilkaha ilkaha lagu caddeeyo, wuxuu leeyahay qalin qalin ku caddeeya gudaha, way sahlanaan doontaa in lagu dabaqo ilkaha ilka caddeeya, waxaan taageernaa adeegga oem. Waxaan ku dari karnaa astaantaada astaanta baakadka.
caday ilkaha tirtir ilkaha ilka caddeeya
Shaygaani waa far-tirtirid, sidoo kale waxaa loogu yeeri karaa buraash afka ah, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa daaweynta ilkaha oo caddeeya, maaddadeedu waa dhar aan tolmo lahayn, way fududahay in ilkaha la nadiifiyo kahor ilkaha oo caddeeya.
Ilkaha mashiinka ilkaha lagu caddeeyo
Mashiinkaan yar ayaa ah mid loogu talagalay nadaafadda afka maalin kasta, waxay wax ku ool u tahay ka saarista wasakhda madax adag ee ku jirta iligga, waxay hagaajin kartaa mid cusub oo afka ah, iibinta kulul ee ilkaha mashiinka lagu nadiifiyo. Waxaan ku taageernaa adeegga oem, oo leh astaan ​​calaamadeed.
Hagaha hagaha ilkaha oo caddeeya
Hagaha hoosku waa isbarbardhiga natiijada ka hor iyo ka dib inta ilkaha la daaweynayo, waxaad arki kartaa inta shaashadood ee ilka caddeysa kadib. Way fududahay in la isticmaalo waana inay u baahan tahay ilkaha ganacsi caddeeya.
ilkaha dhuxusha ilkaha lagu caddeeyo budada dhuxusha dhuxusha
Badeecadani waa adeegsiga guriga ilkaha nadaafadda afka maalin kasta oo budada caddeeya, maaddada ugu muhiimsan ee laga helo waa dhuxusha qumbaha, badbaado leh oo wax ku ool ah, waxaan taageernaa oem, ku dar calaamadda sumadda alaabta.
guriga waxaad ku isticmaashaa ilkaha dhadhanka reexaanta ee caddeeya
Moodalkan ilkaha rinjiga caddeeya waxaa loogu talagalay isticmaalka guriga ee ilkaha maalin kasta daryeelka caddeeya, waad u isticmaali kartaa maalin kasta, waxay leedahay 14 kumbiyuutarro ilko ah oo caddeeya xarigga dhexdiisa, waxaan ku dari karnaa calaamadda astaanta, u habeyn xirmada.
Qalabka isku xira USB ee ilka caddeeya si loogu isticmaalo guriga
Qalabkan ilkaha lagu caddeeyo ee ilkaha ayaa loogu talagalay in lagu isticmaalo guriga, wuxuu leeyahay saddex ilbiriqsi oo ilka ah oo qalin ku caddeeya gudaha, isku xiraha USB-ga wuxuu ku xirmi karaa android ama tufaax, ilkaha caddeeya jelku waxay la socon karaan hp, cp ama peroxide midna, ama pap gel, waan oem karnaa sumaddaada sumadeedu daaran tahay.
ilkaha ku caddeeya saxaarad afka leh jel prefilled
Mashiinka noocan ah ee afka lagu qaato waxaa ku jira jel la soo buuxiyay, xirmada banaanka waa bacda xaashi, waxaan ku sameyn karnaa ilkaha oo ku caddeeya jel dhuxul madow ama jel cadaan ah, hp ama cp ama ma jiro peroxide gel.
ilkaha midab dahabi ah oo cadeeya qalin 2ml / 4ml
Moodelkan ilkaha oo cadeeya qalinku wuxuu leeyahay midab kala duwan, badiyaa waa dahab, qalin ama hufan, wuxuu leeyahay 2ml ama 4ml, waxaan ku sameyn karnaa cp ama hp ama midna ma jirto peroxide gel, ama pap gel.and habeyn astaanta qalinka, fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin ah.
ilkaha caddeeya jel 3ml 5ml 10 ml hp cp ama peroxide midna
Ilkahan caddeeya saliingaha jel waa caadi iibinta kulul, waxaanan leenahay mug kala duwan, 3ml, 5ml, 10ml, waxaan ku sameyn karnaa nooc kala duwan oo jel ah, sida hp ama cp ama ma jiro peroxide gel, ama pap gel.
Ilkaha caagga ah ee dabiiciga ah ee caddeeya
Ilkaha jilicsan ee la jajabiyey waxaa loo isticmaalaa adeegyada ilkaha lagu caddeeyo ama qalliinka ilkaha, Ka ilaali nudaha jilicsan ee afka (bushimaha iyo carrabka) ， Hagaajinta heerarka raaxada bukaanka, yaree cabsida bukaanka.